M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။
Myanmar IT Resource Forum » ADMINISTRATION BOARD » » Announcement » M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။
1st Anniversary ပွဲသို့
မသေချာသေးသဖြင့် သေချာမှ အကြောင်းထပ်ပြန်မည်
1 M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 15th March 2010, 6:11 pm
M.I.T.R Member များအားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ 09.03.2010 ရက်နေ့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Myanmar IT Resource Forum ဟာ တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ Forum Anniversary ပွဲလေးတစ်ပွဲလောက် ကျင်းပချင်ခဲ့ပါတယ်။ Member များနဲ့လဲ ရင်းနှီးမှုတိုးစေဖို့အတွက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Forum Anniversary ကို နောက်ဆုတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ Forum Anniversary ပွဲကို ကျင်းပဖို့အတွက် Mod များနဲ့ Admin များအောင်မြင်စွာ ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျင်းပမည့်နေရက် - 11.04.2010 (တနင်္ဂနွေနေ့)
အဲဒီပွဲမှာ Member များအချင်းချင်းမိတ်ဆက်ကြမယ်။
Knowledge Sharing လုပ်ကြမယ်။ (အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ကိုကိုရဲ (Knowledge Bridge Magazine) က Ubuntu အကြောင်းလဲ ပြောပေးမယ်တဲ့)
Puzzle Game တွေကစားကြမယ်။ (မှန်တဲ့သူတွေအတွက် လက်ဆောင်လဲပေးမှာနော်။)
လာတဲ့ Member အားလုံးကို အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေလဲ ပြန်ပေးမှာပါ။ (Puzzle Game မှာမှန်တာမမှန်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။ လူတိုင်းရမှာ)
လာမည့်သူများ ဒီ Topic အောက်တွင် လာမည့်အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပေးပါ။
လာမည့်အကြောင်း စာရင်းပေးပြီးမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မလာဖြစ်သူများလည်း ကျေးဇူးပြု၍ Cancel ပြန်လုပ်ပေးပါ။
စာရင်းပေးရမည့်နောက်ဆုံးရက်ကတော့ 05.04.2010 ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
လာမည်လို့ စာရင်းပေးထားတဲ့ သူစာရင်းကတော့ အောက်မှာ နံပါတ်စဉ်နဲ့ပြပေးထားပါတယ်။ အမြဲတမ်း Update လုပ်ပေးသွားပါမယ်။
၁ ။ $ƴǩǾ
၂ ။ z3r0c00l
၃ ။ αℓт.332
၄ ။ shinthant
၅ ။ solakoko
၆ ။ ITCHILD
၇ ။ MagicEyez
၈ ။ လင်းထက်
၉ ။ ac!d
၁၀ ။ ζ. ζ. †
၁၁ ။ ထက်နိုင်
၁၂ ။ julykglay
၁၃ ။ ပိစိလေး
၁၄ ။ zarni
၁၅ ။ ဝေလင်း (ET ကိုယ်စား)
၁၆ ။ မသန္တာစိုးတင် (brb's wife)
၁၇ ။ skipsoft
၁၈ ။ aung ko
၁၉ ။ vostro
၂၀ ။ browerfex
၂၁ ။ သီရိ
၂၂ ။ ထားဝယ်သား
၂၃ ။ pooqee
၂၄ ။ dragon
၂၅ ။ ဘီလူး
၂၆ ။ Khin Soe
၂၇ ။ brb.1984
နာမည်မပေးထားမိလဲလာလို့ရတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း စီစဉ်စရာရှိတာ စီစဉ်ရဦးမှာဆိုတော့ စာရင်းပေးထားတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။
မလာနိုင်တဲ့သူတွေက ဘာဖြစ်လို့ မလာနိုင်ပါဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ ကိုရှင်းပြစရာ မလိုပါဘူး... အားလုံးကိုနားလည်ပါတယ်.ခင်ဗျာ
အဲဒီတော့ မလာနိုင်ပါဘူး..မအားပါဘူးတွေ ထပ်မရေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Post တွေရှုပ်ထွေးနေမှာဆိုးလို့ ပါ။
လာနိုင်တဲ့ သူတွေ ပဲ လာပါ့မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ပဲ ပြောသွာကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
Last edited by solakoko on 6th April 2010, 9:59 am; edited 16 times in total (Reason for editing : list updated)
2 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 15th March 2010, 6:18 pm
3 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 15th March 2010, 6:24 pm
M.I.T.R Forum ကြီး ဒီ့ထက်မကအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
4 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 15th March 2010, 6:39 pm
5 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 15th March 2010, 6:40 pm
ကျွန်တော် လဲ လာ ခဲ့ မယ် နော်......
M.I.T.R အမှတ်တရ ရင်ထိုး ဖြစ်ဖြစ် ဝေပေး ဘို့ အကြံပြု ပါရစေ....
6 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 15th March 2010, 6:57 pm
လာဖြစ်အောင် လာရမှာပေါ့။ နည်းနည်း နောက်ကျလို့ရတယ်မလား။
7 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 15th March 2010, 8:01 pm
ကိုယ်စားတက် ခိုင်းလို့ရမလားဗျ.....အဲ့ရက်မှာမြန်မာပြည် ပြန်မယ့် သူငယ်ချင်းကို တက်ခိုင်းမယ်.....လက်ဆောင်
8 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 15th March 2010, 8:25 pm
ဟိုက် တားလည်းလာမလို့ရဘူးလား ဖြစ်နိုင်ရင် အားလုံးပေါင်းပြီး လေယဉ်လက်မှတ်လေးဝယ်ပေးပါလား
ဟီး စတာနော် တစ်ကယ်ဟုတ်ဘူး အားလုံးအဆင်ပြေပါစေကွာ
9 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 16th March 2010, 11:00 am
မြတ်ချွာဖယား...ကပ်စီးပဲ ကိုယ့် သမက်လေး နာမည်တောင် ထည့်မထားဘူး....
10 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 16th March 2010, 11:35 am
အမလေး...ကျွန်တော်က ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကျန်ခဲ့တာလဲဗျာ။
11 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 16th March 2010, 1:35 pm
လူစာရင်းကောက်နေရုံနဲ့ပြီးလားဟင်... အခုကျနော်ကြည့်ရသလောက် ဒီမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေက ကျောင်းသားတွေ၊ လူငယ်လေးတွေပါ... အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေက မရှိဘူးမဟုတ်ဘူး.. ရှိပါတယ်... ဒါပေမယ့် နည်းပါလိမ့်မယ်.. (ကျနော်ထင်တာနော်..) အဲဒိတော့ ဒီလိုပွဲမျိုးလုပ်တော့ ဘာပဲပြောပြော မပါမဖြစ် င၀ိုင်းလေး (ပိုက်ပိုက်) ကတော့ အနည်းနဲ့အများကုန်ကျမှာပါ... အဲဒိအတွက် ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုအစီအစဉ်မျိုးတွေနဲ့ လုပ်ပေးထားတယ် ဘာတွေ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ် ဆိုတာကို အားလုံးသိအောင်တော့ ရှင်းပြကြေငြာပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်... ပြီးတော့ လင်းထက် ပြောသလို အဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ကိုယ်စားတတ်လို့ရလားလို့သိချင်ပါတယ်... မန်ဘာဝင်တစ်ယောက်ပီပီ ဖိုရမ်အထိမ်းအမှတ် အမှတ်တရတခုခုကို လိုချင်လို့ပါ...
12 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 16th March 2010, 5:13 pm
အဝေးရောက်နေတဲ့လူတွေ ကိုယ်စားတက်မယ်ဆိုရင် ကြိုတော့ပြောပေးပါဗျာ။ PM ပို့ ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ ကိုယ်စားပေါ့။ ပိုက်ပိုက်ကတော့ Admin တွေက Member တွေဆီကနေ မကောက်ချင်ဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ လို Mod တွေ၊ Admin တွေ၊ ကပဲ လာမယ့်လူစာရင်းကိုကြည့်ပြီး စီစဉ်မှာပါ။
13 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 16th March 2010, 5:42 pm
14 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 16th March 2010, 5:53 pm
15 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 16th March 2010, 8:02 pm
Vote စာရင်းကိုတွက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်စရာရှိတာဝယ်ရမှာမို့လို့ပါ။
လိုအပ်တဲ့ပိုက်ပိုက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဘဲ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ပြီးတော့ ပွဲအစီအစဉ်တစ်ခုထပ်ဖြည့်ထားတယ်နော်။ (Ubuntu Show!!!)
16 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 9:27 am
လာရမှာပေါ့ဗျာ။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ။စကားမစပ် ဒီပွဲအတွက် ရန်ပုံငွေတို့ ၊ လုပ်အားအကူအညီတို့ လိုရင်ပြောပါ။လုပ်ပေးပါ့မယ်။
Last edited by zawmin on 18th March 2010, 2:42 pm; edited 1 time in total
17 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 9:56 am
ကျနော်လည်းလာမယ်နော် ချန်မထားနဲ့နော် တားတားကို လာမယ်
ပြီးရင် သောက်ကြမယ် သဘောတူပါသလား ခင်ဗျာ
ကဲ ကျနော်က စပြီးတီးလိုက်ပြီးနော်
18 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 10:01 am
ကဲကဲ Vote ကြဦးနော်။ လာမယ့်သူတွေ။
ကျွန်တော်တို့ဘက်က စီစဉ်စရာတွေ အများကြီးရှိသေးလို့ပါ
19 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 10:21 am
zawmin wrote: လာတော့လာချင်ပါတယ်။လူအရမ်းများရင်တော့ အိမ် ကမလွှတ်ဘူးဗျ။
ဒီဆိုက်က Member တွေပါပဲ။ လာဖို့ဖိတ်ပါတယ်ဗျာ။ လာခဲ့ပါ။
20 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 1:06 pm
အင်း...... လာမယ့်သူလည်း သိပ်မရှိဘူးနော်။
21 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 1:54 pm
22 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 1:55 pm
နာလဲ လာမယ်... မြကျွန်းသာဆိုတော့ နာနဲ့ သိပ်မဝေးဘူးဟ မိုက်တယ်...
ဒါနဲ့နာလဲ ထောက်ခံ၏ ရွှီး ဖြောင်းဖြောင်းးး
23 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 2:17 pm
24 လာရင်ကောင်းမလား မလာရင်ကောင်းလား on 17th March 2010, 2:51 pm
ကိုကိုရဲတို့ကတော့ ကြေငြာက ၀င်ချင်သေးတာကိုး။ ဝေလင်းထွန်းကြီးကော ပါဘူးလား။
25 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 2:53 pm
manawphyu wrote: ကိုကိုရဲတို့ကတော့ ကြေငြာက ၀င်ချင်သေးတာကိုး။ ဝေလင်းထွန်းကြီးကော ပါဘူးလား။
Member တွေအတွက် Knowledge Sharing တစ်ခုအနေနဲ့ ပြန်ပြီးပေးလို့ရအောင် ကျွန်တော်တို့ Request လုပ်လိုက်တာပါ။
ဒါနဲ့ မ မနော်ဖြူ လည်း လာခဲ့ပါနော်။ ဖိတ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် လာခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ
26 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 6:04 pm
27 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 17th March 2010, 10:37 pm
ညီရေ အကိုကတော့ လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျို့
ဖိုရမ်အတွက် အောင်မြင်မှုကို နှစ်ခါတောင်လွတ်သွားပြန်ပြီ
28 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 18th March 2010, 8:24 am
Last edited by Mg Ko Ko on 20th March 2010, 5:04 pm; edited2times in total
29 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 18th March 2010, 8:33 am
30 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 18th March 2010, 8:36 am
31 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 18th March 2010, 8:41 am
32 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 18th March 2010, 10:10 am
အော်ဒါနဲ့ဒီပွဲမှာ Ubuntu 9.10 Desktop Edition CD ပေးမှာမို့ လို့ ယူမည့်သူများ ကျွန်တော့ကို PM ပို့ ပြီးစာရင်းပေးကြပါ။ ဒါမှ မလောက်တာတို့ ပိုတာတို့ မဖြစ်အောင်ပေါ့။ Desktop Edition ဆိုပေမယ့် Notebook မှာလည်းသုံးလို့ ရတယ်နော်။
33 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 18th March 2010, 10:17 am
34 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 18th March 2010, 2:36 pm
35 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 18th March 2010, 3:10 pm
36 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 18th March 2010, 3:33 pm
zawmin wrote: ရန်ပုံငွေလှုချင်တယ်။လိုအပ်ရင်ပြောပေါ့ဗျာ
အစ်ကို ဆန္ဒရှိရင် လှူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ နည်းတယ်များတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးမှူးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
37 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 19th March 2010, 10:26 am
ကျွန်တော် လဲ လာ ခဲ့ မယ်။ အခု လို့ ဖိတ်ခေါ်တာ အရမ်းကို ကောင်းပါ တယ်။M.I.T.R ထဲ ပါဝင် တဲ့ ပညာရှင် များ ကို တွေ့ ခွင့်ရတာပေါ့ ။member တွေ ကိုလည်ဲး တွေ့ဖူးသွားတယ်။
38 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 19th March 2010, 10:34 am
ကိုsamurai ခင်ဗျာ အစ်ကို က အခု Online မှ ရှိ တော့ အစ်ကို ကို ပဲ မေးတော့ မယ်
ကျွန်တော် နာမည် ပါ မ ပါ ဘယ် မှာ သွားကြည့် ရမာလဲ
တချက်လောက်ပြောပြပေးပါ တော်ကြာ ငါ စာရင်းပေးထားတာပဲ ဟိုေ၇ာက်တော့မှ ကျွန်တော်စာရင်းမပါရင်
39 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 19th March 2010, 11:27 am
ဟာ ကြည့်လို့ လည်းမရဘူးဗျ။specialUser တွေအတွက်ဆိုလားပဲ။
40 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 19th March 2010, 11:29 am
vostro wrote: ကိုsamurai ခင်ဗျာ အစ်ကို က အခု Online မှ ရှိ တော့ အစ်ကို ကို ပဲ မေးတော့ မယ်
ဒီ Thread ရဲ့ Page 1 မှာ လာမယ့်သူများဇယားထဲမှာ အစ်ကို့နာမည်ကို ထည့်ထားလိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း Update လုပ်လုပ်သွားမှာပါ။ အစ်ကို ဒီပို့စ်မှာသာ စာရင်းပေးထားလို့ကတော့လုံးဝမကျန်ခဲ့စေရပါဘူး။
41 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 19th March 2010, 11:34 am
zawmin wrote: ဟာ ကြည့်လို့ လည်းမရဘူးဗျ။specialUser တွေအတွက်ဆိုလားပဲ။
ဆောရီးပါဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မသေချာမရေရာမှုကြောင့်ပါ။ ဒီမှာလဲကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
42 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 19th March 2010, 9:36 pm
လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ။ ပညာရှင်အားလုံးနဲ့ ခင်မင်ချင်ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံပွဲကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
43 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 20th March 2010, 11:52 am
မပျက်မကွက် လာခဲ့ပါမည်။ count me in
44 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 20th March 2010, 2:28 pm
45 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 20th March 2010, 5:07 pm
Last edited by zawmin on 25th March 2010, 8:50 am; edited 1 time in total
46 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 23rd March 2010, 9:59 am
ကျွန်တော် လည်း ရောက်အောင်လာခဲ့ ပါမယ့် ဗျာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ရောက်အောင်ကိုလာမှာပါ အလုပ် ကို အဲ့းဒီနေ့ ကျရင် ခွင့်ယူပြီးတော့ကိုလာမှာပါ အားလုံးနဲ့လည်း ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆွေးနွေးလို့ ရတာပေါ့
47 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 27th March 2010, 5:29 pm
ကျွန်တော်က လူသစ်လေးပါ ဘာမှ လဲ မသိ ဘဲ ယောင်လည်လည် နဲ့ဝင်လာတာပါ လောလော ဆယ် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလေး တက်ချင်လို့ လူစာရင်းပေးတာပါ အားလုံးပဲ ကျွန်တော့်ကို လဲ ခင်လဲခင် သင်လဲ သင်ပေးကြပါလို့ ။
48 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 27th March 2010, 5:52 pm
pooqee wrote: ကျွန်တော် လည်း ရောက်အောင်လာခဲ့ ပါမယ့် ဗျာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ရောက်အောင်ကိုလာမှာပါ အလုပ် ကို အဲ့းဒီနေ့ ကျရင် ခွင့်ယူပြီးတော့ကိုလာမှာပါ အားလုံးနဲ့လည်း ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆွေးနွေးလို့ ရတာပေါ့
49 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 28th March 2010, 5:23 pm
50 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။ on 28th March 2010, 5:38 pm
တက်ပေးပြီးရင်လည်း ပို့ပေးဦးနော် ဟီး ယူမထားနဲ့
51 Re: M.I.T.R First Anniversary ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းကောက်ခံခြင်း။